अख्तियारमा रिक्त दुई आयुक्तमा किन नियुक्ति भएन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अख्तियारमा रिक्त दुई आयुक्तमा किन नियुक्ति भएन ?
प्रकाशित मिति ५ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि दुई आयुक्तविहिन हुँदा पनि सरकारले नियुक्तिका लागि निर्णायक पहल गरेको छैन ।
काठमाडौं । चौतर्फी दबावपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक फिर्ता…
हवाइ यात्रुका वार्षिक २ करोड लगेज गायब
काठमाडौं । त्यो क्षण सबैका लागि अत्यन्तै निराशाजनक हुन्छ, जब हामी उडान पूरा गरेर आफ्नो लगेज पर्खिरहेका हुन्छौँ तर…
प्रसाईंलाई किन भएन सजाय ?
काठमाडौं । कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण…
अब ‘अन द स्पट’ खाद्य गुणस्तर परीक्षण !
काठमाडौं । सरकारले खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण ‘अन द स्पट’ गर्ने भएको छ । बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रण…
महाअभियोग लाग्नेबित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने, सांसद नहुने
काठमाडौं । सविधानले महाअभियोग लाग्नेबित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद भने फौजदारी अभियोग लाग्दा निलम्बन नहुने भएका…